पहिरोले १५ करोडको क्षति- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
पहिरोले १५ करोडको क्षति
श्रावण २५, २०७७ तुलाराम पाण्डे
कालीकोट — अविरल वर्षापछि जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा गएको पहिरोले करिब १५ करोड रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ । कालीकोटमा पहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना अझै बेपत्ता छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पहिरोमा ९ जना घाइते भए भने ३ सय ५८ घर पूर्णरुपमा भत्किएका छन् । ५ सय ९५ परिवारका २ हजार ५ सय ७८ जना विस्थापित भएर गोठ, विद्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा बसिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले बताए । उनका अनुसार नरहरिनाथ, रास्कोट र सान्नीत्रिवेणीमा मात्रै १२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको मुचुल्का उठाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए । ‘वर्षा नरोकिएकोले क्षतिको विवरण बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारीको लागि जिल्लाभरि प्रहरी परिचालन गरेका छौं ।’ पहिरोले सबैभन्दा बढी नरहरिनाथ, रास्कोट र सान्नीत्रिवेणीमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार पहिरोमा १ सय १७ पशुचौपाया मरेका छन् भने ३ सय ५८ घर भत्किँदा ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । ८९ रोपनी जमिन पहिरोले बगाउँदा ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए ।
कालीकोटको नरहरिनाथ–७, बागामा साउन दोस्रो साता खसेको पहिरोले बगाएको घर र खेत । तस्बिर: तुलाराम/कान्तिपुर
पहिरोले एकै परिवारका ७ जनासहित ११ जनाको मृत्यु भएको र ६ जना अझै बेपत्ता भएको नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार बेपत्ता भेटिने अवस्था नभएकाले मृतकसरह मानेर आश्रित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । वर्षाले नरहरिनाथ–४, गोठी, अदेला, खातीरुप्सा र ५ नम्बर वडाको खलापाटा, भाटगाउँलगायत बस्ती जोखिममा छन् ।
अव्यवस्थित सडक निर्माणले पहिरो बढिरहेको स्थानीय कमल पाण्डेले बताए । ‘पहिरोले कतिखेर पेलेर बगाउँछ भन्ने चिन्ता सबैतिर छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश गाउँका खेतबारी भुकम्पले चिरा पारेकोजस्तो गरी क्षतविक्षत भएका छन् ।’ केही गैह्रसरकारी संस्थाले राहत दिए पनि विस्थापितलाई छाक टार्नै समस्या भएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार अधिकांश गाउँमा हिँडडुल गर्ने बाटो छैन । विद्युत्, खानेपानी र सिँचाइ कुला पहिरोकै कारण अवरुद्ध बनेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हेलिकप्टर चढेर २ पटक गाउँ पुगे पनि पीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । पहिरो पीडितलाई सरकारले दिने भनेको नगद राहत अझै नपाएको नरहरिनाथ–७ बांगाका कुलबहादुर सहकारीले बताए । पहिरोमा परि उनका ससुरा गंग बुढाले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ १८:३३
एकताका लागि अभियान चलाउने सांसदमा गुटको छायाँ
श्रावण २५, २०७७ जयसिंह महरा
पार्टीभित्रका अन्तरविरोध विचार र सिद्धान्तले निर्देशित गरेर पद्धति र प्रणालीमा आधारित भएर अगाडि बढ्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । पार्टी एकताविरोधी हुने क्रियाकलाप तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै उनीहरूले त्यस्ता गतिविधि नरोकेमा निस्तेज पारिने पनि उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय पार्टी विभाजनका लागि सांसदहरू कति जना कुन पक्षमा छन् भन्ने आँकलन हुन थालेको भन्दै उनीहरूले त्यस्तो भूल नगर्न भनेका हुन् ।
सांसदहरूको हस्ताक्षरको अगुवाइ गरेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'हामी सांसदहरूको टाउको गनेर पार्टी विभाजनको सपना देखेको भए त्यो गल्ती नगर्नुस् ।' पार्टी विभाजन गर्नका लागि सांसदहरूको भूमिका खोजी हुने र त्यो बेला आउँदा अहिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदले फुट अस्वीकार गर्ने सन्देश दिनका लागि अभियान चलाएको उनको भनाइ थियो । सांसदले कुनै पनि हदमा पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने गरी भूमिका नखेल्ने पनि दाहालको भनाइ थियो ।
पार्टी विभाजनलाई बल दिने गतिविधि सार्वनिक रूपमा भइरहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने सांसद दाहालले पार्टी एकताको पक्षमा रहेका र 'विभाजनको विरुद्धमा रहेका नेता र जनप्रतिनिधि पनि छन् है भनेर देखाउनका लागि हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको' बताए ।
कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीका संगठनभित्र छलफलको वातावरण नभएको सांसद रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ थियो । उनले शीर्ष तीन नेताहरू अध्यक्षद्वय ओली, पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अब आउने पुस्तालाई कस्तो पार्टी दिने भन्नेबारे सोचेर निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । 'वैचारिक, सांगठनिक, राजनीतिक हिसाबले चुस्त पार्टी बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि टुटफुट भएको खरानी पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ ?' उनको प्रश्न थियो ।
२०५४ सालमा तत्कालीन एमाले विभाजित भएको स्मरण गर्दै वरिष्ठ नेता नेपाल निकट झाँक्रीले पार्टी विभाजन गरेर 'सानो परिवार सुखी परिवार' बनी सानो कोटरी चलाउन सकिने तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावना समेट्न नसकिने बताइन् । उनले नेताहरूलाई पदभन्दा माथि उठेर देश र जनताबारे सोच्न आग्रह गरिन् । अहिलेको गतिमा जाने हो भने भविष्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर सत्तामा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो । 'पार्टी फुटाएर जाउँ' भन्नेहरूलाई रोकेर केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय तथा संसदले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद विशाल भट्टराईले पार्टीभित्र अस्थिरता उत्पन्न भएको अवस्थामा जननिर्वाचित सांसद किन चुप लागेर बसेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेकाले विभाजनविरुद्ध अभियान चलाउनुपरेको बताए । उनले पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, पार्टी कार्यालय र नेताका निवासमा धर्ना दिन पनि तयार भएको बताए । 'पार्टीभित्रको अहिलेको अन्तरविरोध सैद्धान्तिक र विचारको नभई पदको भएको स्पष्ट छ,' प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भट्टराईले भने, 'यसले पार्टीलाई मात्रै नभई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने देखिन्छ । सधैं अस्थिरतामा जान सम्भव छैन अब स्थायित्व र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।'
पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोधले नेकपा कतै फुटको दिशामा अगाडि बढेको त होइन भन्ने देखिएको सांसद गणेश पहाडीको थियो । 'पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर अहिले यो अभियान चलाएका हौं । विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर समस्याको समाधान नेताहरूले नै खोज्नुपर्छ,' उनले भने, 'नेतृत्वले उचित समाधान दिएन भने दोस्रो तहका नेताले हस्तक्षेपकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ ।'
पार्टी एकता गर्नुपहिला गरेको सहमतिलाई कागजको खोस्टो ठान्दा अहिलेको समस्या आएको सांसद नारदमुनी रानाको भनाइ थियो । उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधान अन्त्य गर्नमा स्थायी कमिटी र सचिवालय असफल भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, 'हामी नेताहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौं तर चोइटिएर जाने दिशामा गए हाम्रो साथ रहने छैन । तपाईंहरूको पछि लाग्दा देश र पार्टी कहाँ पुग्ला ?'
पार्टी एकता गर्दा जसरी अध्यक्षद्वयले घोषणा गरेका थिए अब पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने रानाको भनाइ थियो । उनले, 'हामीलाई कार्यकर्ता प्रश्न गरिरहेका छन्- स्थिर सरकारको नारा कहाँ पुग्यो ? जनजीविकाका कुरा कहाँ छन् ? हामीसँग अहिले जवाफ छैन । यी प्रश्न हामी शीर्ष नेतालाई सोध्छौँ । पार्टी एकताको अन्तरिम विधान सर्वसम्मत पारित गरेको हो । त्यो विधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? सबै विषयमा सहमतिमा जाने विधि कसले किन तोड्दैछ ?'
पार्टी एकता फुटका लागि नभएको भन्दै सांसद अन्जना विशंखेले त्यस्तो अवस्थामा कसैलाई सहयोग हुन नसक्ने बताइन् । 'तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण नहुँदै भइरहेको विवाद दु:खद् छ । हामीलाई कुन विचार र विवादले यो अवस्थामा पुर्‍यायो ? हामी फुटका लागि कसैलाई सहयोग गर्दैनौँ ।'
सत्तारुढ नेकपा विभाजन भएमा अहिलेको व्यवस्था असफल हुने सांसद यज्ञराज सुनुवारको भनाइ थियो । उनले नेताहरूको पछि लागेर हस्ताक्षर संकलनमा नलागेको दाबी गरे । 'नेताको जन्मोत्सवमा केक लिएर कुद्नेबाहेक कार्यकर्ता पार्टी एकताको पक्षमा रहेको', उनले बताए ।
पार्टीमा दासहरू मात्रै छैनन् भन्ने कुराको ख्याल नेतृत्वले राख्नुपर्ने सांसद जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'जनताले गरेको विश्वासमा घात गर्न दिनुहुँदैन । नेताहरूले यहाँ दासहरू मात्रै छैनन्, समाज परिवर्तनमा लागेका विचारवाला कार्यकर्ता पनि छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । पार्टी विभाजन क्षम्य हुन सक्दैन,' उनले भने ।
पार्टी विभाजन रोक्नका लागि आफू सांसद र केन्द्रीय सदस्य पद त्याग गर्न तयार रहेको सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए ।
एकताका लागि अभियान चालउने सांसदमा गुटको झल्को
असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्न ओलीलाई दबाब बढेपछि असार अन्तिम साता विवाद उत्कर्षमा थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीवरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन लागिएको भन्ने चर्चा नेकपाका सबै गुटमा व्यापक बनेको थियो । ठीक त्यसै बेला नेकपा सांसदहरूले एकताका लागि दबाब दिन भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले मात्रै हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने केही राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि सहभागी छन् ।
त्यतिबेला वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानलाई अगाडि बढाएका थिए भने अध्यक्ष दाहाल पक्ष पनि त्यसमा सहभागी थियो । नेपाल पक्षबाट सांसदहरू गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, झपट रावलहरू संलग्न थिए भने पूर्वमाओवादीबाट सुरेशकुमार राईलगायतका सांसद थिए ।
त्यतिबेला हस्ताक्षर दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै ओलीपक्ष सशंकीत भएको थियो । ओलीपक्षले आफूनिकट सांसदहरूलाई विचार गरेर मात्रै हस्ताक्षरमा संलग्न हुन भन्दै सचेत गराएको थियो ।
त्यसपछि हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व ओली निकट मानिएका अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गरेका थिए ।
हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने सांसदहरूमा गुटको आभाष भएको थियो । नेपाल निकट सांसदहरूले विधि, पद्दती, पार्टीको घोषणापत्र लगायतमा आधारित भएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए भने ओली पक्षका सांसदले पदका लागि विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद सुनुवार, श्रेष्ठ, रानालगायतले पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको बताएका थिए । 'पार्टीमा दासहरू मात्रै छैनन्' भन्ने बुझ्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो भने । सुनुवारले नेताको जन्मदिनमा जाने बाहेकका कार्यकर्ता एकताको पक्षमा रहेको भन्दै ओली समूहप्रति व्यंग गरे ।
सांसद भट्टराईले भने केही नेताहरूमा पदमा जाने हतारोले पार्टीभित्र किचलो उत्पन्न भएको आरोप लगाए । कोरोना र प्राकृतिक प्रकोपका बेला गाइजात्रा देखाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
अभियानको नेतृत्व लिएका दाहालले बोल्ने क्रममा सांसदहरूमा पार्टीभित्रको समूहका छायाँ देखा परे पनि भविष्यमा त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तो देखिएमा आफूहरू छलफल गर्ने र मिलेर अगाडि जाने उनको भनाइ थियो । आफूहरू पार्टी विभाजनका लागि कसैले बोलाए नजाने र नेताहरूलाई कुनै पनि हालतमा एकताका लागि सांसदहरूले दबाब दिने उनले बताए ।
अभियानमा सांसदहरू थपिने क्रम जारी रहने दाहालको भनाइ थियो ।
पार्टीभित्रको अन्तरविरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न नेकपाका ६१ सांसदको माग
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७७ १८:२९